Ngwunye nri 3-IN-1 China Manufacturer
Nkọwa:Onye na-enye Reel Straightener,Mpempe akwụkwọ na Mpempe igwe Ngwaọrụ,Pịa Straightener-feeder / Uncoiler
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka > Ngwunye nri 3-IN-1
3-IN-1 PRE SS FECHING MCHINE
Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ.
`lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed, decoener, na - enye ha nri, wee zụlite igwe nrụnye.
3-IN-1 Press Feeds Machine dị na mkpụmkpụ ohere emebebepụtara ọzịza iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka nhazi nke ihe ndị nwere ike dị elu - ọbụlagodi ogo dị larịị dị warara.
Ngwunye nri 3-IN-1 dị mma maka ụdị stamping ụgbọala, igwe eji emepụta ihe, kọmputa na akụkụ igwe wdg.
Ọdịnihu nke Cost Feeders - Straighteners
Ngwunye nri 3-IN-1 dị mma maka ịnya ụgbọ ala, ihe nrụpụta akụrụngwa, kọmputa na ngwa elektrọnik, akụkụ ngwanrọ na akụkụ igwe wdg .Azụ Ahịrị: Bracket, Damper, Barke Pad, Tie Bar, ngwa eletriki, akụkụ ihe eji ebi akwụkwọ, Okpokoro kọmpụta, Mpempe ụgbọ ala slide nke oche ụgbọ ala, Splash Shield nke ahụ ụgbọ ala wdg.
Ngwunye nri 3-IN-1 pịa i n Short Space Design na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị.
Nke a bụ otu n'ime ndị ahịa anyị na Slovenia, ha na-arụpụta akụkụ kọmpụta nwere igwe 3-IN-1 Press Feeds Machine .
Onye na-enye Reel Straightener Mpempe akwụkwọ na Mpempe igwe Ngwaọrụ Pịa Straightener-feeder / Uncoiler Onye na-enye Servo Straightener Onye na - enye ORRI Straightener Onye na-enye Servo-Straightener Onye na-enye Servo Coil Straightener Onye na-enye nri Decoiler Straightener